Iiradiator zokopha: njani kwaye uyenze nini kwaye yenzelwe ntoni | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Ngokuqinisekileyo liza kufika ixesha apho iiradiyetha zakho zingafudumali kakuhle njengoko bezenzile ekuqaleni. Oku kunokwenzeka kuba umoya uhlala uqokelela ngaphakathi kuyo yonke inkqubo yokufudumeza kwaye uqala ukuthintela ukujikeleza kwamanzi anoxanduva lokufudumeza iiradiyetha. Ukusombulula le ngxaki kuya kufuneka ufunde ukopha iiradiyetha. Oku kukhusela irediyetha ekukhupheni ubushushu ngendlela engafaniyo. Ihlala icetyiswa ngaphambi kwexesha ngalinye elibandayo ukopha iiradiyetha ukunqanda le ngxaki.
Ngesi sizathu, siza kulinikezela eli nqaku ukuba likuxelele indlela yokucoca iiradiyetha kunye nokubaluleka kwayo.
1 Ukubaluleka kweeeradiyetha ezophayo
2 Nini kwaye njani ukopha iiradiyetha
3 Izivalo ezizenzekelayo kunye nokulinganisa hydraulic
Ukubaluleka kweeeradiyetha ezophayo
Njengoko besitshilo ekuqaleni kwenqaku, kunokwenzeka ukuba iiradiyetha ziqala ukuqokelela umoya kwaye zithintele ukujikeleza kwamanzi afudumeza iiradiyetha. Oku kubangela ukuba kungaphumi ubushushu ngokulinganayo, ke kuyacetyiswa ukuba uqale iiradiyetha zokopha. Ukwenza oku kubandakanya ikakhulu ukuphelisa umoya ongumsebenzi wesekethe yerediyetha. Ngale ndlela, iyakwazi ukuphucula ukusebenza kwamandla ombane wokufudumeza kunye nokuphucula ukusetyenziswa kombane.
Ukusebenza kwamandla kuyonyuka kufakelo lobushushu kunye nokuncitshiswa kwengxolo yangaphandle. Kuqhelekile xa kukho umoya oqokelelweyo ovela kwiinkqubo zokufudumeza ukuva ingxolo engaqhelekanga xa uvula ubushushu. Ezi ngxolo zihlala ziviwa njengezandi ezigungxulwayo ezibangelwa kukuqokelelwa komoya kwiinkqubo zokufudumeza. Olu luphawu lokuba ibonisa ukuba kubalulekile ukopha iiradiyetha ngaphambi kokuqala kwexesha lokufudumeza.
Xa irediyetha iqala ukufudumeza kakubi, i-thermostat ayiveli kodwa ikwari iyaqhubeka nokusebenza. Oku kuyenzeka kuba ayinakufikelela kubushushu obucwangcisiweyo. Oku kwenza ukuba iboiler isebenze kabini kwaye kubangele ukusetyenziswa kwamandla aphezulu ukusukela inkqubo yokufudumeza ayisebenzi ngokufanelekileyo. Kule meko, kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ukufakela ukufudumeza kwethu kusebenza ngokuchanekileyo. Inkqubo yokufudumeza efanelekileyo iyakuthintela ukonga amandla kakhulu ekusebenziseni.
Nini kwaye njani ukopha iiradiyetha
Iinyanga ezilungileyo zokungenisa iiradiyetha ngoSeptemba nango-Okthobha, ngaphambi kokuqala kwexesha lokufudumeza elinamandla. Kulunge kakhulu ukuba siyifudumeze ngaphandle kokulinda ukuba iqondo lobushushu lehle, kuba ukuba khange sicoce ngaphambili, iyakusebenza "ngesiqingatha segesi", ngaloo ndlela kuchithwa amandla kunye nemali. Masibone ukuba ngawaphi amanyathelo okufunda ukopha iiradiyetha. Yinkqubo elula kwaye kuya kufuneka ulandele ezi ngcebiso:
Jonga ukuba ufuna ukopha iiradiyetha zakho: Ukwenza oku, kuya kufuneka uvule ukufudumeza kwaye udlulise isandla sakho ngaphezulu. Ukuba eli candelo libandayo kunelingezantsi, oko kuthetha ukuba kukho umoya ekufuneka uphakame kwaye uphazamisa isekethe.
Kuya kufuneka uqale ngerediyetha ekufutshane kwibhoyila. Yonke imisebenzi iqala ngale radiator kufutshane nebhoyile kuba ukuhamba kwamanzi kwendalo kufuneka kulandelwe.
Beka isikhongozeli phantsi kwesitopcock: kungcono ukhethe iglasi yamanzi kwaye uyibeke phantsi kwempompo. Le yindlela esinokuwuthintela ngayo umhlaba ukuba ungabi manzi xa amanzi eqala ukuphuma.
Isitshixo sijikwe nge-screwdriver: Ingqekembe inokusetyenziselwa ukuvula itephu yevalve. Kuqala umoya ophumayo sakuba siyivulile impompo uyanuka. Ukusuka apha sinokubona amanye amanzi avela kwijet engekazokufana.
Impompo kufuneka ivalwe xa i-jet inamanzi: Xa i-jet yamanzi iphuma ngokupheleleyo kwaye ifana, kufuneka siyivale impompo, kuba oko kuya kuthetha ukuba umoya sele uphumile, ke kufuneka siyivale itephu kwelinye icala.
Umsebenzi kufuneka uphindwe kuzo zonke iiradiyetha: Khumbula ukuba kubalulekile ukulandela irediyetha yiradiyetha yokuhamba kwamanzi ngokwendalo. Ukuba kukho naziphi na iiradiyetha ezidlulayo, akukho mfuneko yokwenza lo msebenzi.
Okokugqibela, kulungele ukujonga uxinzelelo kwibhoyila. Kufuneka ibe kwixabiso le-1-1.5 bar kuba emva kokucoca inqanaba loxinzelelo luyehla. Kubalulekile ukuba inqanaba loxinzelelo kula manqanaba.
Ukuba awufuni ukwenza yonke le misebenzi uwedwa okanye uwedwa, ungafowunela ingcali eya emsebenzini kwaye ikwanokhathalela ukucoca yonke inkqubo yerediyetha kwaye uyiyeke ilungele ixesha lokufudumeza eliphezulu.
Izivalo ezizenzekelayo kunye nokulinganisa hydraulic
Iinkqubo zokufudumeza zala maxesha zinokuba ne-valve ezenzekelayo ngenkqubo yokukhupha eyenzekelayo. Olu hlobo lwevalvu lukhupha umoya ngokuzenzekelayo, ke akukho mfuneko yokuba wophe ngesandla. Ukuba kwezi ndidi zevaluva, uqaphele ukuba irediyetha ayifudumezi kakuhle, ngenxa yezizathu zokhuseleko, kungcono ukubonisana nengcali ukukhangela inkqubo.
Xa irediyetha ingatshisi i-100%, oko kuthetha ukuba inkqubo yokufudumeza ayinakusebenza ngokufanelekileyo, ebangela inkcitho yamandla engeyomfuneko. Inkqubo yokufudumeza efanelekileyo inokuthintela ukuchitha amandla kwaye ke yonge umbane. Ukongeza ekucoceni iiradiyetha, amanye amanyathelo anokuthathwa ukuze asebenze kakuhle kwezi radiator.
Xa sithetha ngofakelo olushushu olusembindini, kukho inkqubo enokuthi yenziwe ngokulula ukuqinisekisa ukuba zonke iiradiyetha zifumana amanzi ayimfuneko ekusebenzeni kwazo, oku kubizwa ngokuba Ukulinganisa hydraulic. Le yinkqubo ekufuneka yenziwe ngabafakeli bezobuchwephesha abafanelekileyo, kungenjalo kuya kubakho iingxaki ezahlukeneyo ngexesha lenkqubo yofakelo.
Kukho izibonelelo ezahlukeneyo zokulingana kwe-hydraulic:
Kwelinye icala, ivumela ukuhamba kwamanzi okwaneleyo ukufikelela kuzo zonke iiradiyetha.
Fumana izivalo ze-thermostatic zokulawula ubushushu
Okokugqibela, ibhalansi ye-hydraulic efanelekileyo inokuyiphepha ingxolo ecaphukisayo ngexesha lofakelo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nokuba uzophisa njani iiradiyetha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » Izibane ezophayo
Izinto ezibangela ungcoliseko
IiHeterotrophs: ziyintoni kunye neempawu